2021 booqashooyin caafimaad: maxaa dib loo dhigay ama aan dib loo dhigin
Dib u dhigistu waxay khuseysaa laba nooc oo imtixaanno ah;
booqashada ugu horeysa ee macluumaadka iyo kahortaga (marka laga reebo kooxaha qaarkood ee halista kujira: caruurta yar yar, haweenka uurka leh, shaqaalaha habeenkii, iwm) iyo cusboonaysiinta;
cusbooneysiinta imtixaanka aqoonta iyo booqashada dhexdhexaadka ah ee shaqaalaha ka faa'iideysanaya kormeerka la xoojiyay marka laga reebo shaqaalaha ay ku dhacaan shucaaca ionizing ee lagu tilmaamay qeybta A.
Dhamaan imtixaanadan, waqtiga kama danbaysta ah ee ay tahay inuu yimaado Abriil 16, 2021 (ama horeyba dib loogu dhigay markii ugu horeysay oo aan la abaabuli karin kahor Diseembar 4, 2020) dib ayaa loo dhigi karaa ugu badnaan hal sano kadib.
Si kastaba ha noqotee, dib u dhigistooda ma ahan mid nidaamsan, waa dhakhtarka shaqada Yaa go’aaminaya. Wuxuu dooran karaa inuu ilaaliyo iyaga marka loo eego macluumaadka uu hayo ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee shaqaalaha, iyo sidoo kale khataraha la xiriira goobtiisa shaqada ama xaaladiisa shaqo.
Booqashooyinka caafimaadka ee 2021: waxa dib u dhigistu adiga kuu tahay
Adiga ma aha inaad adigu abaabusho dib u dhigista laakiin waa inaad ku hagaajiso daawada shaqada. Marka waa dhakhtarka shaqada inuu:
hal dhinac, waxaan ku ogeysiinayaa dib u dhigista sidoo kale
Booqashooyinka caafimaadka ee 2021: waa maxay waajibaadkaagu? July 10th, 2021Tranquillus
horeCanshuurta laga jaro 2021: shabakadaha heerka ugu hooseeya
socdaTababbarka animation dhaqdhaqaaqa ee PowerPoint
Hordhac dhaqanka ciyaarta muuqaalka